Nantsi yonke into uKaputeni waseMelika: Imfazwe yamakhaya ilungile kwaye ayilunganga - Inkcubeko Yopopu
Yonke into uKaputeni waseMelika: Imfazwe yamakhaya yafumana ngokuchanekileyo kwaye ayilunganga kakhulu
Emva kwento ebonakala ngathi ingunaphakade lokulinda, I-Captain America: Imfazwe yamakhaya Ekugqibeleni iphezu kwethu, iza kwiithiyetha ngokulindela okukhulu kakhulu. Ummangaliso weCinematic Universe usondela kwisiphelo esinomdla, kunye nokwaziswa kwamalungu e-cosmic endalo iphela ( UGqirha Strange ngo-Novemba), kunye nokubuya okuzayo kwabahlobo abathile begalactic ( Abagcini beGalaxy 2 Kwihlobo elizayo), ke eli ingayilixa lokugqibela kwindalo iphela emhlabeni. Le meko ikwayimeko yokuba uninzi lwabalandeli beencwadi ezinoburharha besazi kakuhle ukuba yintoni igama Imfazwe yamakhaya ibandakanya . Ibali lokuqala lalinjalo Umdaka kancinci , Ukutshintsha ukuthembeka kunye nobuntu babalinganiswa abathile ngendlela yokolula umdlalo weqonga. Kuqulathe ukufa okukhulu kakhulu okushukumise indalo ixesha elide. Umboniso bhanyabhanya, ngombulelo, awungeni kwimicimbi efanayo-kwaye ukwaziswa kwabalinganiswa ekudala belindelwe kunye nabacingelwayo kudala kwenza imovie ibe libali layo.
Nangona kunjalo, loo nto ayitsho ukuba akukho micimbi ngayo. Nazi izinto ezintlanu ezithi I-Captain America: Imfazwe yamakhaya benze ngokuchanekileyo, kwaye izinto ezintlanu ezingakhange zenze mhlaba ngendlela ebekufanele ukuba babe nayo.
ngubani chris brown ukuthandana 2017
Isilumkiso: Abancinci abancinci ngaphambili.
Ulawula ukuphucula izinto zoMthombo: Uninzi lwabalandeli behlaya baya kuvuma- Udabi lasekuhlaleni yayiludano olukhulu ngokwendaba. Ukuba nomlo omkhulu wamagorha alwayo kufanele ukuba ibe kukuqhutywa kwekhaya, kodwa ngokulandelelana ayisebenzi nje-amaqhawe angenza utshintsho olungakholelekiyo kubume kunye nenjongo, kwaye uTony Stark wayesoyikeka ngokusemthethweni. Ukulungelelaniswa kwe-MCU kulungelelanisa umbono kancinci, ukuba awuhambelani ngokupheleleyo nomxholo webali lokuqala kwiihlaya. Ibali lokubhaliswa kwe-Superhero beats lisaxhaphakile, kodwa intliziyo ye-movie ubudlelwane phakathi kweCaptain America, iBucky Winter Soldier Barnes, kunye noTony Stark. Ngelixa Ubudala be-Ultron idlalwe ikhululekile ngokwenene kunye nemixholo yemithombo yolwazi, Udabi lasekuhlaleni luhambo olupheleleyo, kwaye luziva lungcono kwaye luhlaziyekile ngokwenza oko. Zombini #TeamCap kunye #TeamIronMan banamanqaku asemthethweni, kwaye ngokungafaniyo nohlobo lwencwadi ehlekisayo, awuziva ungumntu owoyikekayo ekusebenzisaneni necala elinye.
INDODA YESIGCAWU: Ukubandakanywa kobuhlobo bethu, ubumelwane besigcawu-sendoda Udabi lasekuhlaleni kwaye kwiMarvel Cinematic Universe yayiyeyona nto inkulu abaya kuyenza / abayi kuyenza? amabali kwimbali yemidlalo bhanyabhanya. I-Spidey yayiyinxalenye yencwadi ehlekisayo yeli bali, ke kwabonakala kufanelekile ukuba u-Sony kunye noMarvel / Disney bangcwabe i-hatchet kwaye banike abalandeli isiqalo esitsha kwi-webslinger, kunye noJamie Foxx omncinci kwimake eluhlaza okwesibhakabhaka. Ndiyavuya ukutsho ukuba iSigcawu-Mntu sisebenza ngokupheleleyo ngexesha elichithweyo Udabi lasekuhlaleni . Hes wisecracking, scene-steal, and most of all, ubonakala ngathi hes izakuba yinto enkulu. Iipropathi ezinkulu ziya nakuTom Holland, ukuguqula umntu othandabuzayo njengam abe likholwa.
Indawo yokulwa isikhululo senqwelomoya: Lo mboniso uza kukwenza ulahlekelwe yinto yakho. Idabi elixhonyiweyo phakathi kweCaps New Avengers kunye neTony Starks ragtag iqela lamaqhawe liza kuhla njengenye yezona ndawo zingalibalekiyo kwiMarvel Cinematic canon. Iinxalenye zayo ezilinganayo zihlekisayo kwaye zikhohlakele-njengabalinganiswa esiye sabathanda kule minyaka ilishumi idlulileyo ekugqibeleni baphose phantsi kwaye banenye yeyona nto imangalisayo. Esi sesinye seziqendu ezininzi apho umlo wokulwa ubuchule kunye nolwalathiso lwabazalwana bakaRusso luza kunye kwi-nirvana epheleleyo. Yonke into apha iyavakala, kwaye iyadlala njengedabi elikhulu ocinga ngalo ngamanani akho omsebenzi njengomntwana.
I-Panther emnyama: Nokuba ususa le ndawo sele ichazwe ngasentla, iBlack Panther ixabisa ixabiso lokwamkelwa. UChadwick Boseman ubethelela le ndima, alinganise inqanaba elifanelekileyo lokuzola kunye nomsindo ongafakwanga kwi-TChalla. Ibali lakhe elibuhlungu sisihlunu esikhulu sokudibanisa Udabi lasekuhlaleni , ukusazisa kumlingiswa ongaqondakaliyo ngaphandle kokuziva ngathi uyabhola kumdlalo bhanyabhanya ngokugqithileyo. Njengaye uSigcawu-Man, unikwa isihogo sezinto ezininzi nxamnye nabalingisi abaninzi ukuze aqinisekise ukuba kutheni (mhlawumbi) IBHOKHANE — uhlamba kakhulu WONKE UMNTU alwa naye kumdlalo bhanyabhanya (kwaye ukuba awukho kwisigqibo esingathandabuzekiyo ngewayephumelele umlo kwisikhululo seenqwelomoya eyedwa). Lilonke, oku yayisisingeniso esihle kumlinganiswa othandwayo ngumlandeli. Ndibhalisele i-movie yedwa, kwaye ubuyisele umva UGqirha Strange , Idisney.
Cwangcisa iTheyibhile yesiGaba esiLandelayo se-MCU: Kwiminyaka emibini edlulileyo, besiyicinga lonto Ubudala be-Ultron ingayilungisa yonke indalo yeCinematic Cinematic. Sasisiphosakele kakhulu. Ngelixa imovie yatyhala amabali amaqhawe ethu awathandayo ngesantya somkhenkce- kunye noTony ethatha umhlala phantsi (KWAKHONA) kunye neseti entsha yeAvengers- Udabi lasekuhlaleni Ngokwenene ubeka ikamva elinomdla nelingaqinisekanga ikakhulu kubo bonke abantu. Ngaphandle kokunika nantoni na, ubuhlobo buyavavanywa, kwaye ezinye iziphelo ezingathandekiyo ngaphakathi kweCaptain Americas ibali arcs ziyacaciswa-kwaye ngelixa zininzi iziteki njengoko i-Id yayilindelwe, ubuncinci ndithabatheka sisalathiso esiya ngokulandelayo.
Into Oyifumene Ingalunganga
Ngaphantsi kokuphekwa kweDolophu / abahlali: Oku kuphantse kwaba yinto ye-MCU okwangoku. Nokuba kukwaziswa kunye nokuphuma ngokukhawuleza kweCrossbones malunga nemizuzu emihlanu, okanye ukutyhilwa kwamadevu ajikelezayo uHelutut Zemo, Udabi lasekuhlaleni ayinabenzi bobubi ukufanisa charisma yamaqhawe ayo. Bazama ukunika uZemo ubunzima obunamandla obuninzi kuninzi, kodwa isicwangciso sakhe sokumisa amaqhawe ngokumelene nomnye sidibene ngokupheleleyo, kwaye ngokunyanisekileyo, sihleka. Kubonakala ngathi ubona ngaphezulu kuye, kodwa ukudibana phakathi kwamagorha kunomdla ngakumbi-kwaye leyo yingxaki.
I-Spider-Man yayingeyomfuneko ngokupheleleyo: Nje ukuba wehle kumbono owoyikekayo wokubona uSigcawu-mntu ethetha ne-Iron Man, uqala ukuqonda ukuba wayengalifanelanga ibali. Ingxaki yokuqala kukuba hes hayi phantse njengombindi womlinganiswa kule bhanyabhanya njengoko wayekuzo ii-comics, ngenxa yokuba ibali lilonke latshintshiwe ukuba lisebenze ngaphandle kwakhe kwasekuqaleni. Kukho imibuzo emikhulu ekufuneka iphendulwe (UTony wazi njani hes Spider-Man ukuba usebenze iinyanga ezintandathu kuphela? Wayemlungiselele njani isuti? Kwakungathi ukongezwa kwakhe kumdlalo bhanyabhanya yayiyimbonakalo encinci yemovie yakhe, kulungile, kodwa ungayinqumla imizuzu eli-10 ukuya ku-15 ukuphuma kwe-movie kwaye ungalahleki kwaphela.
Ukuba ujonge iziGxina emva kwexesha kakhulu: Ngokukhawuleza nje ukuba abantu beve ukuba imovie elandelayo yeCaptain America iya kuba nethegi yemfazwe yamakhaya, bakhawuleza bacinga ngezibonda eziza negama, ukusweleka nangona kunjalo. Kwaye ngelixa kukho ubuhlobo obuvavanyiweyo kwaye buphukile ngandlela thile ngokuphela kwemovie, imovie yayidlala ikhuseleke kancinci kakhulu ngee-beats eziphambili kunye neziganeko. Amaxesha amaninzi, i-MCU inetyala lokungaqhubeli phambili nakubani na ngaphandle kukaTony Stark, kwaye ngelixa uSteve efumana ithuba lokugoba imigaqo Udabi lasekuhlaleni , ayisosigqibo esophula indalo yonke. Akukho kugungqiswa okukhulu ukuphela kokungeniswa kwe-MCU, ke basala benethemba lokuba Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo izakuphakamisa
Inkuthazo kaMurky yabalinganiswa abaphambili: Ngaphandle kokuntywila kude kubaphangi, inkuthazo yabalinganiswa abakwisiqingatha sesibini sebhanyabhanya ayinantsingiselo, kwaye isebenza kuphela ekubhaleni okunye kokubhala okuhle kunye nokuseta ukusuka kwimizuzu yokuqala engama-45. Umzekelo: UTony ufumanisa inyani malunga nendima kaBuckys kwisiganeko esibalulekileyo ebomini bakhe (ekutyhilweni okukhohlisayo), kodwa ngasizathu sithile uyaqhubeka nomlo wakhe ngokuchasene nengqondo. Umboniso bhanyabhanya urhuqa umise ngezigqibo ezenziwa ngabanye abalinganiswa, ukumisa imuvi ekufikeleleni kwisigqibo esisengqiqweni.
Ukuphela kuya kukuCaphukisa: Emva kwako konke ukuphakama kweemvakalelo oko Udabi lasekuhlaleni ithatha abaphulaphuli, ayinamatheli ukubambelela kwisakhelo sokugqibela. Iziqwenga zonke ziyahlangana ukuze ziphele xa wonke umntu eza kuthetha iminyaka, endaweni yoko akhethe indlela ekhuselekileyo, enesithukuthezi. Oku kunxibelelana ngokusondeleyo kuninzi lwemovie engalunganga, kodwa apho loo 'enye' ukubonakaliswa kweqhawe kuye kwaphumelela kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, Udabi lasekuhlaleni uhlobo lokukhubeka xa ushukumisa indalo iphela kwaye uzama ukubuza imibuzo. I-middle and end credits stingers arent that enjoyable either, most setting up future movie that were already set up ngokwaneleyo kulo lonke ixesha lokudlala. Ngelixa silinde uNovembers UGqirha Strange ukusisa kwisigaba esilandelayo seMarvels cinematic universe, Udabi lasekuhlaleni Umboniso bhanyabhanya oqinileyo onokuthi uphulukane nendlela yawo embindini emva kokuvela kwemidlalo yokulwa kunye namaqanda eIsta.
iimoto ezikhawulezayo nezinomsindo kwi-gta 5
Iresiphi yekeyiki yamaqunube emanzi enamaqunube amatsha
Uyenza njani ikhekhe lomnyama ngokulula
Umxube wobukhosi we-icing yongeza nje amanzi